Myanma News » မြစ်ဆုံကိစ္စ စာချုပ်နှင့် ကိုင်ပြသော် – (အောင်ချိန်ဘွား)	11
kai says: ဘူလဲကွ.. ရန်စတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: လက်လျှော့ သင့်ပါပြီ သဂျီးရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 486
Swal Taw Ywet says: သူကြီးနဲ့ အမျိုးအရင်း ကြီးပါခင်ဗျာ။ ခင်ဗျ။
koyinmaung says: ညောင်မြစ်တူးလို့ကတော့ဖွတ်ဥတွေပေါ်လာမှာအမှန်ဘဲ…
kai says: ဘယ်လိုဖျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဖက်က စဉ်းစားတွေးသွားတာဖြစ်တာမို့.. မှားတယ်…။
အစိုးရတော်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ငင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Thint Aye Yeik says: ဧရာဝတီအစား တခြားမြစ်တစ်ခုနဲ့ အစားထိုး လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်ကော….
kai says: သေလုဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့..သေလတံ့သော အဓိကမြစ်ကြီးက.. ဧရာဝတီလေ..။
သမိုင်းတရားခံမဖြစ်စေလင့်..။ The Rongbuk glacier, the biggest glacier on Mount Everest’s northern slopes. The photo above was taken in 1968 and the one below was taken this year (2007).
kai says: နိုင်ငံရေးအရ.. အလျှော့အတင်းတော့ မလုပ်ထား..
ခင်ဇော် says: မြစ်စုံ လို့ ကြားရင်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .သဂျီးတင်ပြတာလည်းကောင်းပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးလက်ခံလာအောင်စည်းရုံးနိုင်ဖို့တော့